चितवनमा एमालेले तानावाना बुनेको सूचना हामीलाई आइरहेको थियोः रेणु दाहाल - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
चितवनमा एमालेले तानावाना बुनेको सूचना हामीलाई आइरहेको थियोः रेणु दाहाल
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना गर्ने क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि १९ नम्बर वडामा पुनः मतगणना गर्ने कि मतदान भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेले पुनःमतगणनाको पक्षमा चर्को आवाज उठाईरहेको छ भने कांग्रेस र माओवादी पुनः मतदानको पक्षमा छन् ।
मतपत्र च्यातिएपछि दलहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । घटनाको वास्तविकता अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन् । मतगणना रोचक मोडमा पुगेको अवस्थामा मतपत्र च्यातिएको छ । प्रस्तुत छ यसैसन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरतपुर महानरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार रेणु दाहालसँग नेपाली हेडलाइन्सका लागि प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
भरतपुरमा मतगणना गर्ने क्रममा मतपत्र च्याचिएपछि उत्पन्न विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सुरुदेखि मैले भरतपुर महानगरपालिका उम्मेदवारी दिएपछि मेरो विरुद्ध गलत प्रचार गरिएको थियो । जुन प्रचारलाई एमालेबाट उम्मेदवार बनेका देवी ज्ञवालीले झन गलत ढंगले प्रचार गर्नु भयो ।
यतिसम्म कि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नै चितवनमा आएर छुद्र अभिव्यक्ति दिन पछि पर्नु भएन । ओलीले कार्यकर्तालाई जे सिकाउनु भयो । त्यसैगरी निर्वाचनको अवधिभर मेरो विरुद्ध प्रचण्ड पुत्रीको रुपमा गलत ढंगले प्रचार गरियो । हार्ने अवस्था आएपछि मलाई बदनाम बनाउने उदेश्यले एमालेले मतपत्र च्यात्ने काम गर्यो ।
मतगणना गर्नु अघि पनि विवाद भयो । अन्तिम अवस्थामा मतपत्र नै च्यात्ने काम भयो । एमालेले यसको सम्पूर्ण दोष तपाईको पार्टीलाई लगाएको छ नि ?
कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रचण्ड चितवन आउदा पनि हेलिकोप्टर लिएर मतपेटिका साट्न आयो भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएकै हो । मतगणना गर्नु अघि पनि मैले बोल्दै नबोलेको विषयलाई गलत ढंगले प्रचार गरियो । मैले रुखमा परेको मत आफ्नो पक्षमा गणना गर्नुपर्छ भनेको थिइन ।
उम्मेदवार भएदेखि नै मेरो विरुद्ध निरन्तर गलत प्रचार गरियो । मेरो विरुद्ध पर्चा बनाएर नै जनताको बीचमा मध्य रातमा भ्रम छर्न खोजियो । देवी ज्ञवालीले ३८ सय मतले अग्रता गर्दा पनि हामीले निकै संयमित र धैर्यको साथ स्वीकार गर्यौ ।
लोकन्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार गरेपछि हार र जित स्वभाविक हो । त्यसलाई स्वभाविक रुपमै स्वीकार गर्नुपर्छ । जब मतान्तर घटेर ७ सय ३३ मा आइपुग्यो । तब एमाले हारको मानसिकताका पुग्यो । अनि मतपत्र च्यात्ने दोष हामीलाई लगायो ।
मतपत्र च्यात्ने घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो घटना दुःखदायी छ । नहुनु पर्दथ्यो । जुन घटनाले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । अहिले त्यही घटनालाई कारण देखाउदै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने काम गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट घटनाको सत्यतथ्य आउन बाँकी नै छ ।
माओवादीमाथि घेराबन्दी गर्ने दबाब र धम्की दिने काम भएको छ । एमालेले जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । सरासर गलत छ ।
जे नहुुनु पर्दथ्यो, त्यो भइनै सक्यो । अबको विकल्प भनेको नियम र कानून अनुसार पुनः भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा मतदान गर्नुपर्छ । हामी अहिले पनि जिम्मेवार छौं ।
पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ निर्वाचनमा पार्टीको हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर एजेण्डाले जित्नु पर्छ । निर्वाचनमा भाग लिएपछि हार र जित हुन्छ । यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्छ । हामीले लिएको पनि छौं ।
घटनाको वास्ताविकता के हो ?
एमालेहरुले गलत रुपमा एकतर्फी रुपमा कुप्रचार गरिरहेका छन् । अहिले माओवादीले मतपत्र च्यात्यो भनेर भनिरहेका छन् । वास्तविकता र यर्थातमा मतपत्र एमालेका कार्यकर्ताहरुले च्यातेका हुन् ।
जब मतान्तर घटदै गयो । तब एमालेहरु आत्तिएका थिए । हार्ने निश्चित भएपछि धेरै ठूलो छटपटी देखिएको थियो । हामीले जे परिणाम आएपनि धेर्यताको साथ मतगणना कार्यलाई सघाइरहेका थियौं । निर्वाचन हार्ने भएपछि एमालेहरुले केही गर्नुपर्छ भनेर तानाबुना बुनिरहेका थिए । त्यो सूचना आइरहेको थियो ।
मतगणना गर्ने क्रममा पटक–पटक निहुँ खोल्ने काम गर्दै आएको थियो । मतगणनास्थलमा टर्च लाइट लैजाने, हुलदंगा गर्ने विभिन्न प्रयास असफल हुँदै आएको थियो । अन्तिममा अर्घकट्टीमा स्वस्तिक छाप लगाएको विषयमा निहुँ खोज्ने काम भयो । दुवै पक्षबीच भनाभन भयो ।
त्यसपछि एमालेका प्रतिनिधि मतपत्र च्याने काममा उत्रिए । मतपत्र जोगाउन एमालेलाई रोक्ने क्रममा केही मत्रपत्र च्यातिएको हो । माओवादीले मतपत्र च्यातेको होइन । मतपत्र जोगाउन खोज्दा हामीमाथि मतपत्र च्यातेको आरोप लागेको छ । यो सरासर झुट र कपोकल्पित हो ।
अब निर्वाचन अयोगले पुनः मतगणना गर्ने निर्णय गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचन सम्बन्धि कानूनी जे व्यवस्था छ त्यही अनसार पुनः मतदान गर्नुपर्छ । मतदान गर्नुको अर्को विकल्प छैन् । मतपत्र च्यातिएको छ । मगणनास्थलमा लथालिङ्ग छ । मतपत्र च्यातिएपछि मगणना कार्य नै स्थगित भएको छ ।
मतगणना गर्ने कार्य सम्भव हुन सक्दैन । यो स्वीकार्य छैन् । सबै नियम अनुसार चल्नु पर्छ । पुनः मतदानपछि जे परिणाम आउछ म त्यो स्वीकार गर्न तयार छु ।
Previousकसरी बन्छ गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका ?
Nextअायाे असार १४ को निर्वाचन तालिका (तालिका सहित)